Njikọ Njikọ na randlọ Brand na Semalt
Gịnị bụ Njikọ Owuwu?
Mkpa njikọ Njikọ
Youzọ Can Pụrụ Isi Jiri Atụmatụ Owuwu Brand na-enyere Enyemaka Njikọ aka
Mkpa ịmepụta njikọ dị elu adịbeghị mkpa karịa iji guzobe weebụsaịtị gị dị ka ikike na niche gị. Njikọ njikọ na-emewanyewanye ka Google na-eme ka iwu ya dị ọhụrụ, ọ na-achọkwa nchikota ụzọ dị iche iche, echiche na omume iji rụpụta nsonaazụ kachasị mma.
Lelee anya na ịntanetị niile ị ga-achọpụta na ụdịrị ahịa siri ike na-achịkwa weebụ. Ya mere ọ dị oke mkpa na ịmalite ịhụ ụlọ njikọ dị ka ihe dị mkpa maka ika, ma n'otu oge ahụ na-ahụ ika dịka ụzọ isi nyere aka wulite njikọ dị elu. Nghọta a emeela ka ọtụtụ ndị na-ekwu na ụlọ njikọ bụcha otu ihe a na-ewu ụlọ ika. Na Semalt, anyị maara na eziokwu bụ ụkpụrụ abụọ a na-arụ ọrụ aka iji nye gị ọganiihu azụmahịa n'ozuzu ya. ¬
Gịnị bụ Njikọ Njikọ?
Buildinglọ njikọ bụ usoro ịnweta ma ọ bụ nweta hyperlinks site na weebụsaịtị ndị ọzọ na ịntanetị na saịtị gị. Njikọ hyperlink (nke a na-akpọkarị njikọ) bụ naanị ụzọ maka ịnyagharịa n'etiti ibe na ịntanetị.
Ngwa enyocha, dị ka Google, na-eji njikọ maka web craw - ha na-adọka njikọ ndị dị n'etiti ibe dị iche iche na weebụsaịtị gị, na-achọgharị njikọ ọ bụla dị n'etiti weebụsaịtị nke ọ bụla.
1. Ọ na - enyere aka na njikarịcha nchọta: E nwere ụzọ abụọ Google na - eji njikọ. Nke mbu bu ichoputa peeji ohuru na web ma nke abuo bu inyere ha aka inye uzo kwesiri ekwesi na nsonaazụ ọchụchọ ha.
Mgbe ọ bụla ndị ọrụ nchọta na-achọ ibe weebụ, ha nwere ike wepụ ọdịnaya nke ibe ndị ahụ ma tinye ya na ndebiri ha. Nke a bụ otu ha ga - esi mata ma ihu akwụkwọ zuru oke ha chọrọ, ọ tosiri ịbụ ọkwa nke ọma maka isi okwu dị mkpa.
Ọdịnaya nke ibe gị abụghị naanị ihe na-ekpebi ihe na-enye gị ntụpọ na Google TOP 100 - Google na-atụle ọnụọgụ njikọ ndị na-abịa na peeji nke ajụjụ site na weebụsaịtị ndị ọzọ na ogo nke saịtị ndị ahụ. Nke a pụtara na ị nwere ohere dị elu nke ogo dị mma na nsonaazụ ọchụchọ ka weebụsaịtị ndị nwere ogo dị elu na-ejikọ aka gị.
Otutu ndi nyocha ihe nlebara anya ejirila okwu a mee ihe na iribiga ihe ókè; ya mere, Google bidoro chọpụ mmelite nke iwu ha iji kwụsị omume ndị a. Google ejirila ọtụtụ weebụsaịtị wepụrụ websaịtị ha karịa ntaramahụhụ Google dị na ya. O siri ike webụsaịtị weghachite ụdị ntaramahụhụ ndị ahụ. Ya mere, ọ dị mma ka ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ jiri echiche nke njikọ ụlọ na-adịghị agafe agafe.
N'otu ụzọ ahụ njikọ njikọ dị elu nwere ike ịbara weebụsaịtị gị uru site n'inye gị ọnọdụ dị mma na Google TOP, njikọ dị ala nwekwara ike imebi ọnọdụ gị na TOP. Websitesfọdụ ebe nrụọrụ weebụ na-asọmpi nwere ike ịchọ iji okpu okpu SEO na-ewetara gị ala ka ha wee bulie elu dị ka nsonaazụ. Yabụ, ọ ga-adị mma ka ị mụrụ anya mgbe niile iji jụ njikọ dị otú ahụ. Na Semalt , anyị na-eche mgbe niile maka ndị ahịa anyị.
2. Ọ na - enyere aka ịbawanye okporo ụzọ Ozi Ntuziaka: Njikọ ga - enyere gị aka inweta ọnọdụ ịchọrọ na Google TOP mana ị maara na ha nwekwara ike ibuga okporo ụzọ gaa na ebe nrụọrụ weebụ gị? Njikọ dị elu sitere na ebe nrụọrụ weebụ na-agakarị nwere ike iduzi okporo ụzọ ha na saịtị gị. Ma oburu na webusaiti ha bu nke kwesiri ekwesi n’onyinye gi, enwere ohere di elu na okporoko nke esi na njikọ ha gha abu ndi ahia.
Ya mere, ijikọ ụlọ na saịtị ndị ọzọ abụghị naanị ọnụọgụ okporo ụzọ ha na-enweta kama ọ dị mkpa maka okporo ụzọ ha na ihe ị ga-enye na webụsaịtị gị.
3. Ọ na-enyere aka ịmalite mmekọrịta: Mgbe mgbe, njikọ njikọ ga-agụnye iru na blọọgụ na saịtị dị mkpa na niche gị. Ọtụtụ mgbe, ị na - agakwuru ndị ikike ndị a iji nyere aka kwalite ọdịnaya ị mepụtara ọhụrụ na isi ihe kpatara ya bụ iji nweta njikọ site na ha nke Google nwere ike ịtụle dị ka ihe ga - eme ka ị dị mma.
Ugbu a uru uru SEO dị, ịbịakwute ndị na - eme ihe na ụlọ ọrụ gị nwere ike inyere gị aka wulite mmekọrịta ogologo oge na ha nke ga - ewulite ọkwa nzere gị n'anya ndị na - azụ ahịa.
4. Ọ na - enyere aka na ika ụlọ: Mgbe a na - eme njikọ njikọ nke ọma, ọ nwere ike inyere gị aka ịghọ ikike ụlọ ọrụ site na ịme ka ika gị pụta otu mgbe niile.
Ihe omuma di n’ime bu otu n’ime otutu ihe eji eme ka ichota ndi ahia gi ihe omuma gi, nke puru inyere gi aka iwulite akara di ike.
Ka anyị kwuo na ị mepụtara ọdịnaya dị egwu site na iji data dị mkpa anakọtara site na ụlọ ọrụ gị ma ị na-ebipụta ya na ntanetị, Ohere inweta bụ na ewu ewu na ụlọ ọrụ gị ga-abawanye. Mgbe ahụ ị gaa nyere ndị ọzọ aka na ụlọ ọrụ gị iji nweta njikọ, ị na-egosipụta ahụmịhe gị ma n'otu oge ahụ na-agbasa ọdịnaya gị na ndị na-ege ntị karịa.
N'otu ụzọ ahụ ejikọta ụlọ nke nwere ike inye aka na ụlọ ụlọ ika, a na-ahụ ụzọ ụlọ ọrụ dị iche iche nke ejiri rụọ ọrụ iji nyere aka rụpụta njikọ dị mma. Ka anyị leba anya n'ụfọdụ usoro ndị ọkụ ji ama ama na-eji ma hụ otu a ga-esi tinye ha n'ọrụ na njikọ ụlọ.
1. Mmalite, ogo na nnọgidesi ike nke ọdịnaya na mmekọrịta: ogo nke ọdịnaya gị yana mmekọrịta gị ga na-agwa ndị ahịa gị nke ọma ezigbo ngwaahịa nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ị ga-enye. Gbalịsie ike ka ị na-eme ihe kacha mma mgbe ị na-achọ ọdịnaya ma ọ bụ na-atụnye ụtụ maka mkparịta ụka na weebụsaịtị ma ọ bụ blọọgụ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na -ekwupụta ọdịnaya dakọtara na-agbanwe agbanwe, nke mbụ na nke ga-eme ka nghọta ahịa gị sie ike. The na-enwekwu ikike, ị na-eme njikọ njikọta karịa njikọta.
2. Mmepụta Ohere: Ikike nke ndị na - eme atụmatụ ọzọ anaghị eleghara ndị na - ege ntị anya. N’otu aka ahụ, ogo nke ozi njirimara gị dịkwa mkpa maka ịdobe weebụsaịtị na akwụkwọ ndị ziri ezi.
Mgbe ọ bụla ị nọ na ngwa ahịa nnweta njikọ, jụọ onwe gị mgbe ọ bụla ma atụmatụ ahụ ga-eburu akara gị gaa na ọnọdụ ịchọrọ ka ọ jidere n'ahịa ahịa ya.
Ebumnuche pụrụ iche nke ika gị kwesiri inwe ọnọdụ mgbe niile na ntanetị na mmekọrịta gị na ntanetị. Shouldkwesiri iji njikọ dị ka àkwà mmiri maka ndị nwere mmasị n'ihe ngosi gị nwere inye. Yabụ, nweta njikọ sitere na weebụsaịtị nwere ndị na-ege gị ntị ma mee ka ọ dịrị ha mfe ịchọta gị.
Isi ihe n’inweta njikọta nke na-eme ka nghọta dị mma na njikarịcha njirisi nchọta bụ site n’inwe ozi dị ika na weebụsaịtị ndị dị mkpa.
3. relationshipsmekorita mmekorita: Invkpọ ndị ọrụ ụlọ ọrụ ka ha nye onyinye maka ọdịnaya gị na ebe nrụọrụ weebụ gị ma na -emere ha otu ihe ahụ bụ atụmatụ dị egwu nke nwere ike inyere gị aka wulite njikọ. Mkpakọrịta gị na ụdị ndị ọzọ nwere ike ịtụkwasị obi na ụlọ ọrụ gị ga-enyere gị aka ile anya karịa ịtụkwasị obi na ntụkwasị obi.
Zọ kachasị mma iji gosipụta mkpakọrịta gị bụ site na ọdịnaya ị na-enye ndị na-ege gị ntị. Yabụ, ọ dị mkpa ịrịọ ndị ọgbọ gị ka ọbịa bịa dee nke blọọgụ gị, dịka ọmụmaatụ.
Could nwekwara ike ịrịọ ka ị degharịa ụfọdụ ihe ochie ha (nke dị mkpa maka ndị na-ege gị ntị) na saịtị gị - ma n’ezie, ị nwere ike inye ndị ọgbọ gị otu ohere ịmegharị ọdịnaya ochie gị.
Otu uru atụmatụ mmeri a bụ na ọ na-ewusi ntụkwasị obi n'ozuzu ya na ntinye akwụkwọ nke weebụsaịtị. Uru ọzọ ị ga-atụle bụ na ebe ọ bụ na a ga-akwalite ọdịnaya a na netwọk abụọ ahụ, ha ga - enwetakwa njikọ njikọ ntanetị na ndị ahịa / ndị na - agụ akwụkwọ ọhụrụ. Ihu gi na-esiwanye ike n’anya ndi obia ohuru mgbe ha huru mmekorita n’etiti gi na ndi ahia ndi ozo atukwasiri obi.
4. tkọ akụkọ: Nke a bụ otu n'ime echiche kachasị ike na ika. Nnukwu ụdị niile nwere nnukwu akụkọ agbakwunyere na ụdị ha na ụmụ mmadụ siri ike ịkọ akụkọ.
Ọ bụrụ na ị nwere akụkọ mara mma na-agbanwe agbanwe, ọ ga - eme ka ọ dịrị gị mfe iji aka gị tinye njikọ na igodo ya n'ime ozi gị, nke a ga - enyere gị aka inweta ọnọdụ ndị ị na - achọ na Google TOP.
5. Creatmepụta ndị nnọchi anya ika: Ndị mmadụ dị njikere ịtụkwasị mmadụ ibe ha obi karịa ika ahụ. Mụta idobe akara gị anya site n'inye ya ihu.
Zụlite ndị mmadụ ga-abụ ọkọlọtọ nke njirimara gị maka ịntanetị niile. Ha ga - enyere aka ịkọ akuko gị, mee ka ị mara ma mee ka echiche nke ika gị dị ka enweghị ike. Ndị nnọchi anya ika a ga -emepụta njikọ ndị ga - eme ka ọtụtụ okporo ụzọ gaa na saịtị gị ma meziwanye ọkwa gị na Google TOP.
Buildinglọ njikọ ga - enyere gị aka ịmepụta akara siri ike na ụlọ ụlọ ika nwere ike iji nyere gị aka ịmekwu njikọ dị elu. Ejikọtara ụlọ njikọ ya na ụlọ ika ya na echiche ha jikọtara ọnụ. Nweghị ike wulite akara nrịba ama na ntanetị na ejighi njikọ jikọtara ọnụ na ya. Semalt nwere akụrụngwa kachasị mma na ụlọ ọrụ iji nyere gị aka ma ụlọ njikọ yana ụlọ nke ika maka ịga nke ọma nke azụmahịa gị.